Teach Archives - Cele Platform
သင်္ကြန်မှာ ရေစိုနေတဲ့ဖုန်းကို ပြန်​​ကောင်းလာဖို့အတွက်​ အထိ​ရောက်​ဆုံးနည်းလမ်း
April 14, 2019 Ko Feed 0
ဖုန်းပြင်​ဆိုင်​သွားစရာမလိုပဲ မိမိအိမ်​မှာ ဖုန်းကိုပြန်​​ကောင်း​အောင်​လုပ်​နိုင်​ပါတယ်​ ] တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ဖုန်းကရေထဲကျသွားတဲ့အခါ ၊ရေစိုသွားတဲ့အခါ- ဖုန်းကိုချက်ချင်းအသုံးမပြုပါနဲ့။ ရေထဲကဆယ်ယူထားပြီး အရင်ဆုံးပါဝါပိတ်ထားလိုက်ပါ။ Sim ကဒ်နဲ့တခြား SD ကဒ်လိုမျိုးအရာတွေကိုထုတ်ထားပါ။သဘတ် ဒါမှမဟုတ် ရေစုတ်မယ့်အဝတ်တစ်ခုခုနဲ့ ဖုန်းကိုသုတ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ဖုန်းရဲ့အပေါက်လေးတွေကနေေ ရတွေထွက်လာနိုင်အောင် ဖြေးဖြေးသာလှုပ်ခါပေးပါ။ သင်္ကြန်မှာ ရေစိုနေတဲ့ဖုန်းကို ပြန်​​ကောင်းလာဖို့အတွက်​ အထိ​ရောက်​ဆုံးနည်းလမ်း2[…]
လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ သဘောခွေ့နေကြတဲ့ အ.ထ.က ၂ ဒဂုံ – မြို့မကျောင်း. ကဆရာ နဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ အက
November 30, 2018 Cele Platform 0
လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ အ.ထ.က ၂ ဒဂုံ – မြို့မကျောင်း. က ဆရာ နဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အမှိုက်ပညာပေးဗီဒီယိုလေးဟာ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာခေတ်စားနေပါတယ်။ အမှိုက်မကောက်ဖို့ ပညာပေးတဲ့ သီချင်းလေးကို စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ သင်ရင်း ကနေကြတဲ့ ဆရာတွေ နဲ့ ဆရာတွေ ရဲ့ သင်ကြားတဲ့အတိုင်း လိုက်ကနေကြတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ […]